आजको मौसमको पूर्वानुमान - Jhapa Online
बिर्तामोडमा अनिश्चितकालिन लकडाउन
झापाका बाढी पीडित भन्छन्– अब के‌ गर‌ी खाने‌ ?
जनताका निम्ति खो‌ई त प्रतिदान ?
माइलाबा मनो‌चिकित्सा गर्छन् अर‌े‌ !
कचनकवलको बजेट ५३ करोड बढी
कोरोना नियन्त्रणका लागि इजराइलमा रहेका कनकाईबासी युवाको सहयोग, नगरपालिकालाई दिए ७५० थान पीसीआर किट
आजको मौसमको पूर्वानुमान
झापा, २१ असार । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबारको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायु को प्रभाव रहेको छ भने भारतको पूर्वी उत्तर प्रदेशमा निम्न चापिय क्षेत्र रहेको छ ।
यसैगरी, महाशाखाले बिहानको मौसमको अवस्थाबारे समेत जानकारी दिएको छ । महाशाखाले हाल देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही केहि स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको जनाएको छ ।
महाशाखाले आइतबार दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रही धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै, प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।
यसैगरी, महाशाखाले आइतबार राति देशभर साधारणतया बदली रही केहि स्थानहरुमा स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ भने, प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमानमा उल्लेख छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन समिति बिर्तामोड नगरपालिका (झापा) को अपिल
आज ३८० थपिए, ४० डिस्चार्ज भए
झापामा समुदायस्तरमा कोरोना देखिएपछि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह सक्रिय
जसका कारण आठ करोड रुखबिरुवा र वन्यजन्तु खरानी भए
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मलाई दुवै पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छः प्रधामन्त्री ओली